Ciidamada Puntland oo wariye ku xiray gudaha magaalada Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada Puntland oo wariye ku xiray gudaha magaalada Garoowe
Ciidamada Puntland oo wariye ku xiray gudaha magaalada Garoowe
August 6, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland ayaa wariye ku xiray gudaha magaalada Garoowe, sida ay xaqiijiyeen Ururka Warbaahinta Puntland ee MAP.
Cumar Maxamed oo la shaqeeya mareegta Horseed Media ayaa lagu xiray gaudaha Garoowe caawa oo Axad ah, sida ay sheegeen MAP.
Ma cadda sababta loo xiray Cumar, balse tani waa mid kamid ah cadaadis ka dhan ah warbaahinta oo dowladdu ay masuul ka tahay.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa shaqada ka joojiyay guddoomiyaha haayada waddooyinka Puntland Cabdirisaaq Yuusuf Cilmi, sida lagu sheegay digreeto ka soo baxday madaxtooyada xilli dambe xalay oo Khamiis ahayd. Digreetada laguma [...]